Health Archives - ShwengweGames
အမျိုးသားတစ်ဦးအိပ်ပျော်နေစဉ် လင်းနို့ကိုက်ခံရတာကြောင့် ခွေးရူးပြန်ရောဂါနဲ့သေဆုံး
November 23, 2021 November 20, 2021 by Shwengwe Games
အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ အိပ်ခန်းထဲမှာ အိပ်နေစဉ် လင်းနို့ကိုက်ခံရပြီး တစ်လအကြာတွင် ခွေးရူးပြန်ရောဂါဖြင့် သေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ အမေရိကန်၊ Illinois မှာ အသက် 80 အရွယ်ရှိ အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ နိုးလာပြီး သူ့လည်ပင်းပေါ်မှာ လင်းနို့တစ်ကောင်ကို တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲ့နောက် ကျန်းမာရေး တာဝန်ရှိသူများက ခွေးရူးပြန်ရောဂါ ကုသမှုကို စတင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း အကြံပေးခဲ့‌ေပမယ့်လည်း ငြင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်လကြာပြီးနောက်တွင် အမျိုးသားဟာ လည်ပင်းနာခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ လက်များကို ထိန်းချုပ်ရခက်ခဲခြင်း၊ လက်ချောင်းများ ထုံကျင်ခြင်းနှင့် စကားပြောရခက်ခဲခြင်းစတဲ့ လက္ခဏာများ စတင်ခံစားရပါတော့တယ်။
လင်းနို့ကို ဖမ်းစီးပြီးနောက် စစ်ဆေးကြည့်ရာ ခွေးရူးပြန်ရောဂါရှိ‌ေကြာင်း သိရှိခဲ့ရပြီး ခဏအကြာတွင် အမျိုးသားဟာ သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန် ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးစင်တာ (CDC) ဟာ ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် စမ်းသပ်ပြီးနောက် အမျိုးသားရဲ့ရောဂါလက္ခဏာကို ယခုသီတင်းပတ်တွင် အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ သေဆုံးသွားတဲ့လူနှင့် ထိတွေ့မိခဲ့သူများကိုလည်း ကြိုတင်ကာကွယ် ကုသပေးခဲ့ပါတယ်။ အီလီနွိုက်ပြည်နယ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာန (IDPH) က တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် ကျွမ်းကျင်သူတွေက သူ့အိမ်မှာ လင်းနို့ကိုလိုနီ တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
IDPH ဒါရိုက်တာ Dr Ngozi Ezike က “ခွေးရူးပြန်ရောဂါဟာ ဘယ်ရောဂါမဆို သေဆုံးနှုန်း အမြင့်ဆုံးပါပဲ။ ဒါပေမယ့်၊ ခွေးရူးပြန်ရောဂါရှိတဲ့ တိရစ္ဆာန်နဲ့ ထိတွေ့ပြီး‌ေနာက် အမြန်ကုသမှုခံယူမယ်ဆိုရင် အသက်ကယ် ကုသမှု ရှိပါတယ်။ ခွေးရူးပြန်ရောဂါကူးစက်ခံရတယ်လို့ထင်ရင် ချက်ချင်းဆေးကုသမှုခံယူပြီး ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူတွေနဲ့ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအရာရှိတွေရဲ့ အကြံပြုချက်တွေကို လိုက်နာပါ။” ဆိုပြီးပြောပြခဲ့ပါတယ်။ CDC ရဲ့အဆိုအရ လင်းနို့အများစုဟာ ခွေးရူးပြန်ရောဂါမရှိကြ‌ေပမယ့်လည်း အမေရိကန်တွင် ရောဂါကူးစက်ခံရသူအများစုမှာ ညအချိန် နို့တိုက်သတ္တဝါမှတစ်ဆင့် ကူးစက်ခံရခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ US တွင် တစ်နှစ်လျှင် ခွေးရူးပြန်ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုဟာ တစ်ယောက်ကနေ ၃ယောက်‌ေလာက်ထိပဲ ရှိပါတယ်။
အမ်ိဳးသားတစ္ဦးဟာ အိပ္ခန္းထဲမွာ အိပ္ေနစဥ္ လင္းႏို႔ကိုက္ခံရၿပီး တစ္လအၾကာတြင္ ေခြး႐ူးျပန္ေရာဂါျဖင့္ ေသဆုံးသြားခဲ့ေၾကာင္း သိ႐ွိရပါတယ္။ အေမရိကန္၊ Illinois မွာ အသက္ 80 အ႐ြယ္႐ွိ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးဟာ ႏိုးလာၿပီး သူ႕လည္ပင္းေပၚမွာ လင္းႏို႔တစ္ေကာင္ကို ေတြ႕႐ွိခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ေနာက္ က်န္းမာေရး တာဝန္႐ွိသူမ်ားက ေခြး႐ူးျပန္ေရာဂါ ကုသမႈကို စတင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အၾကံေပးခဲ့‌ေပမယ့္လည္း ျငင္းပယ္ခဲ့ပါတယ္။ တစ္လၾကာၿပီးေနာက္တြင္ အမ်ိဳးသားဟာ လည္ပင္းနာျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ လက္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရခက္ခဲျခင္း၊ လက္ေခ်ာင္းမ်ား ထုံက်င္ျခင္းႏွင့္ စကားေျပာရခက္ခဲျခင္းစတဲ့ လကၡဏာမ်ား စတင္ခံစားရပါေတာ့တယ္။
လင္းႏို႔ကို ဖမ္းစီးၿပီးေနာက္ စစ္ေဆးၾကည့္ရာ ေခြး႐ူးျပန္ေရာဂါ႐ွိ‌ေၾကာင္း သိ႐ွိခဲ့ရၿပီး ခဏအၾကာတြင္ အမ်ိဳးသားဟာ ေသဆုံးသြားခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးစင္တာ (CDC) ဟာ ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ စမ္းသပ္ၿပီးေနာက္ အမ်ိဳးသားရဲ႕ေရာဂါလကၡဏာကို ယခုသီတင္းပတ္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ေသဆုံးသြားတဲ့လူႏွင့္ ထိေတြ႕မိခဲ့သူမ်ားကိုလည္း ႀကိဳတင္ကာကြယ္ ကုသေပးခဲ့ပါတယ္။ အီလီႏြိဳက္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဌာန (IDPH) က ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ ကြၽမ္းက်င္သူေတြက သူ႕အိမ္မွာ လင္းႏို႔ကိုလိုနီ ေတြ႕႐ွိခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
IDPH ဒါ႐ိုက္တာ Dr Ngozi Ezike က “ေခြး႐ူးျပန္ေရာဂါဟာ ဘယ္ေရာဂါမဆို ေသဆုံးႏႈန္း အျမင့္ဆုံးပါပဲ။ ဒါေပမယ့္၊ ေခြး႐ူးျပန္ေရာဂါ႐ွိတဲ့ တိရစၧာန္နဲ႔ ထိေတြ႕ၿပီး‌ေနာက္ အျမန္ကုသမႈခံယူမယ္ဆိုရင္ အသက္ကယ္ ကုသမႈ ႐ွိပါတယ္။ ေခြး႐ူးျပန္ေရာဂါကူးစက္ခံရတယ္လို႔ထင္ရင္ ခ်က္ခ်င္းေဆးကုသမႈခံယူၿပီး က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈေပးသူေတြနဲ႔ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးအရာ႐ွိေတြရဲ႕ အၾကံျပဳခ်က္ေတြကို လိုက္နာပါ။” ဆိုၿပီးေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ CDC ရဲ႕အဆိုအရ လင္းႏို႔အမ်ားစုဟာ ေခြး႐ူးျပန္ေရာဂါမ႐ွိၾက‌ေပမယ့္လည္း အေမရိကန္တြင္ ေရာဂါကူးစက္ခံရသူအမ်ားစုမွာ ညအခ်ိန္ ႏို႔တိုက္သတၱဝါမွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ခံရျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ US တြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေခြး႐ူးျပန္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈဟာ တစ္ေယာက္ကေန ၃ေယာက္‌ေလာက္ထိပဲ ႐ွိပါတယ္။
ဝိတ်ချဖို့ ကြိုးစားတဲ့အခါ သတိမထားမိဘဲ လုပ်လေ့ရှိတဲ့ အမှား (၆) ခု
October 28, 2021 by Shwengwe Games
ဝိတ်လျှော့တယ်ဆိုတာ တစ်ကယ်တော့ စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုပါပဲ။ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ အများကြီးလုပ်၊ အစားတွေ ဆင်ခြင်တာတောင်မှ ဝိတ်မကျတာ ဘာကြောင့်ပါလဲ။ ဒါဟာ လူအတော်များများက ကိုယ်တိုင် သတိမထားမိလိုက်တဲ့ အမှားတွေ လုပ်မိနေလို့ပါ။ ဝိတ်မချခင်မှာ ဒါတွေကို သိနေမှ ဖြစ်ပါမယ်။
ဝိတ်လျှော့တဲ့အခါမှာ ကိုယ်ကစည်းမျဉ်းတွေကိုလိုက်နာပြီးကျန်းမာတဲ့လူနေမှုပုံစံမျိုးနေထိုင်စားသောက်နေပေမယ့် လိုချင်တဲ့ရလဒ်မရဘဲ ဝိတ်မကျသလိုခံစားရတာမျိုးရှိတတ်ပါတယ်။တကယ်တော့ ပေါင်ချိန်တွေ ၊ အတိုင်းအတာတွေက နံပါတ်သက်သက်ပါပဲ။အမှန်တော့ ကိုယ်စားသုံးခဲ့တဲ့ အစားအစာနဲ့ အရည်တွေပေါ်မူတည်ပြီး ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ ပေါင်ချိန် ၂ပေါင်ကနေ ၄ပေါင်အထိတော့ အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် အမျိုးသမီးတွေမှာ ဟော်မုန်းပြောင်းလဲမှုဟာ ရေဓာတ်ထိန်းနိုင်မှုကို ဖြစ်စေပါတယ်။အဲဒီအခါ ပေါင်ချိန်မကျပေမယ့် တကယ်တမ်းမှာ အဆီတွေလောင်ကျွမ်းပြီး ရေထုထည်ကျန်နေတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တယ်ဆိုရင် ကြွက်သားတွေ တက်လာပြီး အဆီကျလာပေမယ့် အတိုင်းအတာမပြောင်းတာ ၊ ပေါင်ချိန်မလျော့တာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဝိတ်လျှော့မယ်ဆိုရင် ကိုယ်စားသုံးတာထက် ကယ်လိုရီပိုမိုလောင်ကျွမ်းဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ လေ့လာမှုတွေအရ လူတွေက အစားအသောက်တစ်ခုမှာ ကယ်လိုရီအရေအတွက်ကို လွဲမှားစွာ တွက်ချက်ကြပါတယ်။လေ့လာမှုတစ်ခုအရ အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေကို ပြေးစက်ပေါ်မှာ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့၊ သူတို့လောင်ကျွမ်းသွားတဲ့ ကယ်လိုရီအရေအတွက်ကို ခန့်မှန်းပြီး ကယ်လိုရီအရေအတွက် တူညီတဲ့ အစားအစာကို မှန်းခိုင်းတဲ့အခါ လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ အစားအသောက်မှာ ကယ်လိုရီကို သိသိသာသာလျှော့တွက်ပြီး လွန်ကဲစွာ ခန့်မှန်းကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင် တစ်ချို့က ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ အစားအစာတွေသာမက အခွံမာသီးနဲ့ ငါးလို ကယ်လိုရီများတဲ့ အစားအစာတွေ စားနေမိတာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကယ်လိုရီစားသုံးမှုကို အလွန်အကျွံ လျှော့ချခြင်းကလည်း ကြွက်သားဆုံးရှုံးမှုနှင့် ဇီဝဖြစ်ပျက်မှုကို သိသိသာသာနှေးကွေးစေလို့ ဝိတ်မကျစေပါဘူး။
လေ့လာမှုတွေအရ အလွန်အကျွံ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းက လူအများစုအတွက် ရေရှည်မှာ စိတ်ဖိစီးမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီး ဒါက ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ထိန်းညှိပေးတဲ့ endocrine ဟော်မုန်းများကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။လေ့ကျင့်ခန်းအလွန်အကျွံလုပ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်က ကယ်လိုရီတွေကို ပိုမိုလောင်ကျွမ်းစေဖို့ တွန်းအားပေးခြင်းဟာ ထိရောက်မှုမရှိသလို ကျန်းမာရေးနဲ့လည်း မညီညွတ်ပါဘူး။
ပရိုတင်းဓာတ် လုံလောက်စွာ မစားတာ
ဝိတ်ကျဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင် ပရိုတင်းဓာတ် လုံလောက်စွာရရှိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ပရိုတိန်းပြည့်ဝရင် အစာစားချင်စိတ်ကို လျှော့ချပြီး ပြည့်ဝတဲ့ ခံစားချက်ကို ဖြစ်စေပါတယ်။ပရိုတိန်းဟာ ဇီဝဖြစ်စဉ်နှုန်းကို ထိန်းထားတာ ဒါမှမဟုတ် တိုးစေပါတယ်။ဒါမှသာ ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ကျစေနိုင်မှာပါ။ပရိုတင်းရွေးချယ်မှုမှာ အသား ၊ နို့ထွက်ပစ္စည်း ၊ ပဲအမျိုးမျိုး နဲ့ နှမ်းကြတ်စေ့တို့ဟာ အလွန်ကောင်းမွန်ပါတယ်။
အမျှင်ဓာတ် လုံလောက်စွာ မစားတာ
အမျှင်ဓာတ်နည်းတဲ့ အစားအစာတွေဟာ ဝိတ်ချဖို့ ကြိုးပမ်းမှုတွေကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အပြင် အလုံးစုံ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။သုတေသနပြုချက်တွေအရ အမျှင်ဓာတ် အမျိုးအစားအားလုံးက ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။အမျှင်ဓာတ်ဟာ အူလမ်းကြောင်းရှိ အဏုဇီဝပိုးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ပြီး ပြည့်ဝမှုကို ခံစားရဖို့ ကူညီပေးတဲ့ ဟော်မုန်းတွေ ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
လေ့လာမှုတစ်ခုအရ ကိုယ်အလေးချိန်၏ 10% ထက်ပိုပြီး ဝိတ်ချဖို့ မျှော်လင့်ထားတာဟာ လက်တွေ့မကျတဲ့ မျှော်မှန်းချက်ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ဝိတ်ချဖို့ စိတ်ကူးရှိတယ်ဆိုရင် တစ်ပတ်ကို တစ်ပေါင် ဒါမှမဟုတ် နှစ်ပေါင်နှုန်းနဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ရဲ့ ငါးရာခိုင်နှုန်း ဒါမှမဟုတ် ၁၀ရာခိုင်နှုန်းကျခြင်းက လက်တွေ့ကျပြီး ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ဒါဟာ ကျန်းမာပြီး ဝိတ်ကျတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ခါးနာတာ သက်သာအောင် ဒါလေးတွေလုပ်ကြည့်ပါ
ခါးနာခြင်းဟာ အဖြစ်များဆုံး ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဝေဒနာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ခြံထဲမှာ ဒါမှမဟုတ် အိမ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်နေချိန်မှာ သင့်ကျောရိုးကို ထိခိုက်မိတာမျိုး ဖြစ်နိုင်သလို အားကစားဒဏ်ရာဟောင်း သို့မဟုတ် အဆစ်နာ (arthritis) နှင့် ankylosing spondylitis တို့လို နာတာရှည်အခြေအနေများကြောင့်လည်း ခါးနာနိုင်ပါတယ်။ ရုတ်တရက် သို့မဟုတ် ပြင်းထန်စွာ ခါးနာနေပြီး မသက်သာပါက ဆရာဝန် (သို့) physical therapist များထံမှာ စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တခါတရံမှာ ခါးနာကျင်မှုတွေနဲ့ အဆင်မပြေမှုတွေကို သင်ကိုယ်တိုင် အိမ်မှာ အောက်ပါနည်းလမ်းတွေနဲ့ အလွယ်တကူ ကုသနိုင်ပါတယ်။
ခါးနာတဲ့လူအတော်များများမှာ မှားလေ့ရှိတဲ့ အထင်အမြင်တစ်ခုက မလှုပ်မရှားနေရမယ်ဆိုတာပါပဲ။ အထိုင်များခြင်းက ကျောရိုးနှင့် ကျောတစ်ဝိုက်ရှိ ကြွက်သားများကို အားနည်းလာစေပါတယ်။ ၎င်းကနေတစ်ဆင့် ကျောရိုးအတွက် အထောက်အပံ့ကို လျော့နည်းစေနိုင်ကာ ရေရှည်ခါးနာစေပါတယ်။
မိနစ် ၃၀ လောက် ခပ်သွက်သွက်လမ်းလျှောက်ခြင်း (သို့) သင့်ခွေးလေးနဲ့ လမ်းလျှောက်ထွက်ခြင်းတို့လို သင့်ရဲ့ ပုံမှန်နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုအတိုင်း အမြဲဆက်နေနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။ အနည်းဆုံး တစ်ပတ်ကိုသုံးကြိမ်လောက်တော့ လမ်းလျှောက်ထွက်ဖြစ်ပါစေ။
2. ကြွက်သားများသန်မာ‌စေပြီး အကြောဆန့်ပေးတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းများလုပ်ပါ။
ယောဂ၊ Pilates နှင့် tai chi တို့ဟာ သင့်ကျောရိုးနှင့် တင်ပါးတစ်ဝိုက်ရှိ ကြွက်သားများကို အားကောင်းစေတဲ့ နည်းလမ်းအချို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကြွက်သားများ အထူးသဖြင့် သင့်ဝမ်းဗိုက်ရှိ အဓိကကြွက်သားများဟာ သင့်ကျောကို ပံ့ပိုးကူညီပေးတာကြောင့် ခွန်အားနှင့် flexibility တို့က သင့်နာကျင်မှုကို သက်သာစေပြီး မဖြစ်နိုင်ရန်လဲ ကာကွယ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မနက်မိုးလင်းရင် ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေကို ပထမဆုံးလုပ်ပါလို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အသက်ကြီးသူများ သို့မဟုတ် ဒါမှမဟုတ် အလွန်အကျွံလုပ်မိမှာ စိုးရိမ်သူများအတွက်ကိုတော့ နေ့လည်ပိုင်းလောက် သင့်ခန္ဓာကိုယ်ပူနွေးလာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမှ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို လုပ်ဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။
3. ကိုယ်နေဟန်ထား ကောင်းမွန်အောင်ပြုပြင်ပါ။
ကောင်းမွန်သော ကိုယ်ဟန်အနေအထားက သင့်ကျောအောက်ပိုင်းရှိဖိအားကို သက်သာစေပါတယ်။ ကျောရိုးကို ညီညာနေစေရန် ကူညီပေးဖို့အတွက် တိပ်၊ ကြိုးများ၊ သို့မဟုတ် stretchy bands များကို သုံးနိုင်ပါတယ်။ သင့်ဦးခေါင်းကို တင်ပါးဆုံရိုးနှင့် အတည့်မှာ ဗဟိုထားပါ။ ပခုံးကို မကျုံ့ပါနဲ့။ လည်မဆန့်ပါနဲ့။
ကွန်ပျူတာရှေ့ အလုပ်လုပ်ရသူဖြစ်ပါက လက်နှစ်ဖက်ကို စားပွဲမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် အညီချထားပြီး သင့်မျက်လုံးကို screen အပေါ်ဘက်နှင့် အညီထားပါ။ သင့်ထိုင်ခုံမှ ထပြီး အကြောဆန့်တာမျိုး၊ လမ်းလျှောက်တာမျိုး ပုံမှန်လုပ်ပေးပါ။
4. ကျန်းမာသော ကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းသိမ်းပါ။
ကိုယ်အလေးချိန် လျော့နည်းသွားခြင်းဟာ ကျောရိုးပေါ်ရှိ mechanical force ပမာဏကို လျော့နည်းစေတာကြောင့် နာကျင်မှုကို သက်သာစေပါတယ်။
အကူအညီလိုအပ်ပါက သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်မည့် အစားအစာနှင့် လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်အတွက် သင့်ဆရာဝန်ထံ အကြံဥာဏ်တောင်းကြည့်ပါ။
ကျန်းမာတဲ့ကျောရိုးဟာ သင့်ကျောကို ပျော့ပြောင်းစေပြီး ကြွက်သားများတောင့်တင်းခြင်းနှင့် နာကျင်ခြင်းတို့မှလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
စီးကရက်များနှင့် အခြားဆေးရွက်ကြီးထွက်ပစ္စည်းများမှာ ပါဝင်တဲ့ နီကိုတင်းဟာ သင့်ကျောရိုးရှိအရိုးများကို အားပျော့စေပြီး အဆစ်များကို ကျစ်လစ်စေတဲ့ spongy disk များမှ အရေးကြီးသော အာဟာရဓာတ်များကိုလည်း ထုတ်ယူပစ်နိုင်ပါတယ်။
6. ရေခဲကပ်ခြင်းနှင့် အပူပေးခြင်းတို့ကို စမ်းကြည့်ပါ။
အများအားဖြင့် ရေခဲက သင့်ကျောဘက် ရောင်ရမ်းနီရဲနေတဲ့အခါမျိုးအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ တောင့်တင်းနေတဲ့ ကြွက်သားတွေကို ဖြေလျှော့ဖို့အတွက်ဆိုလျှင်တော့ အပူပေးတာ ပိုကောင်းပါတယ်။ သင့်အတွက် ဘယ်နည်းလမ်းက ပိုအဆင်ပြေမလဲသိဖို့ကိုတော့ နှစ်မျိုးလုံး စမ်းကြည့်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
ရေခဲနှင့် အပူကုထုံးများကို တစ်ခါလုပ်လျှင် မိနစ် ၂၀ လောက်သာလုပ်ဖို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကြွက်သားနာကျင်ကိုက်ခဲမှု သက်သာစေတဲ့ လိမ်းဆေးများ (သို့) လိမ်းဆေးများလိမ်းထားလျှင်တော့ အပူနဲ့ ရေခဲတို့ကို မသုံးသင့်ပါဘူး။
7. သင့်တော်တဲ့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများကို ရှာဖွေပါ။
ဆေးစာမလိုတဲ့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများကလည်း ကြွက်သားများတောင့်တင်းခြင်းအတွက် ကူညီနိုင်ပါတယ်။ ကောင်တာမှာ ရွေးချယ်နိုင်တဲ့ အဓိကအမျိုးအစားနှစ်ခုကတော့ nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) နှင့် acetaminophen တို့ဖြစ်ပါတယ်။ NSAIDs တို့တွင် aspirin, ibuprofen နှင့် naproxen တို့ပါဝင်ပါတယ်။
နာမည်အတိုင်းပဲ NSAIDs တွေက ရောင်ရမ်းမှုကို လျော့ကျစေပါတယ်။ Acetaminophen ကတော့ ရောင်ရမ်းခြင်းကို မသက်သာစေပါဘူး။ ရံဖန်ရံခါ ခါးနာခြင်းအတွက် ဘယ်အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးကိုမဆို အသုံးမပြုနိုင်ပါတယ်။ သင့်မှာ ကျောရိုးအဆစ်နာခြင်း (သို့) အခြားရောင်ရမ်းမှုအခြေအနေများရှိလျှင်တော့ NSAIDs များက ပိုသင့်တော်နိုင်ပါတယ်။
8. Medicated cream များ လိမ်းပေးပါ။
Skin creams, salves, ointments နှင့် patches များက သင့်ကျောဘက် တောင့်တင်းခြင်း၊ နာကျင်ခြင်းနှင့် တင်းမာခြင်းတို့ ခံစားရတဲ့အခါ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ဤထုတ်ကုန်များစွာတွင် menthol, camphor, သို့မဟုတ် lidocaine ကဲ့သို့ နာကျင်တဲ့နေရာကို အေးမြစေ (သို့) ထုံသွားစေ (သို့) အပူပေးနိုင်စေတဲ့ ပစ္စည်းများ ပါဝင်ပါတယ်။
9. ဖြည့်စွက်ဆေးများအကြောင်း လေ့လာပါ။
အစားအစာများမှ သင့်အတွက် လိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင်နှင့် သတ္တုဓာတ်ကိုရယူတာက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်ရံမှာ နာကျင်မှုတွေကို သက်သာစေဖို့အတွက် ဖြည့်စွက်စာတွေက အကူအညီပေးနိုင်သလားဆိုတာကို သင့်ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ကြည့်ပါ။
10. မျက်နှာသုတ်ပဝါကိုလိပ်ပြီး အသုံးပြုကြည့်ပါ။
လဲလျောင်းတဲ့အခါ မျက်နှာသုတ်ပဝါကိုလိပ်ပြီး တင်ပဆုံအောက်ထားပေးထာကလည်း ခါးနာသက်သာစေပါတယ်။ သင့်တင်ပါးကို ပုဝါပေါ်မှာ သက်တောင့်သက်သာရှိစေပြီး ကျောအောက်ပိုင်းက တောင့်တင်းနေတာတွေ ပြေလျော့သွားပါစေ။
ဒဏ်ရာရထားလျှင် (သို့) ခွဲစိတ်မှုအပြီးမှာဆိုလျှင် back brace တွေက တစ်ခါတစ်ရံ ကူညီ‌ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၎င်းတို့ကို မကြာခဏ သို့မဟုတ် အကြာကြီးတပ်ဖို့ မသင့်တော်ပါဘူး။
Source My medicine
ဝက်ရဲ့ ကျောက်ကပ်ကို လူတွင် အစားထိုးနိုင်ကြောင်း အောင် မြင်စွာ စမ်းသပ်နိုင်ခဲ့
ပထမဆုံးအကြိမ် ဝက်ရဲ့ကျောက်ကပ်ကို လူရဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ်က ငြင်းဆန်ခြင်းမပြုဘဲ အောင်မြင်စွာ အစားထိုးစမ်းသပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ယခုကဲ့သို့ အောင်မြင်ခြင်းသည်အလားအလာကြီးသော တိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး အစားထိုးရန် လူသားအင်္ဂါများ ဆုံးရှုံးမှု များပြားခြင်းပြသာနာကို ကူညီပေးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ယခုစမ်းသပ်မှုကို နယူးယောက်မြို့ရှိ NYU Langone Health တွင် ပြုလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလဲထားမှုကြောင့်လူ့ခန္ဓာကိုယ်တွင် အစားထိုးရာမှာ လက်မခံနိုင်တဲ့ တစ်ရှူးများမပါဝင်တဲ့ဝက်တစ်ကောင်ရဲ့ကျောက်ကပ်ကို စမ်း သပ်မှုတွင် အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အစားထိုးရာတွင် လက်ခံတဲ့ လူနာဟာ ဦးနှောက်သေနေသော လူနာဖြစ်ပြီး ကျောက်ကပ်လည်းကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်တော့တဲ့ လူနာတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုစမ်းသပ်မှုအတွက် သူမရဲ့ မိသားစုရဲ့ လက်ခံချက်နဲ့အတူ ပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။
လူနာရဲ့ သွေးကြောများနဲ့ဝက်ကျောက်ကပ်ကို ချိတ်ဆက်လျက် သုံးရက်ကြာအောင် ခန္ဓာကိုယ်အပြင်ဘက်မှာ ထိန်း သိမ်းမှု သုံးရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ စမ်းသပ်မှုတွင် ပါဝင်သူများက ဆိုပါတယ်။
စမ်းသပ်မှုကို ဦးဆောင်သူအစားထိုးခွဲစိတ်ဆရာဝန်ဖြစ်သူ ဒေါက်တာရောဘက် ကတော့ အစားထိုးခွဲစိတ်မှုရဲ့ ရလဒ်အရ ကျောက်ကပ်ဟာပုံမှန်အတိုင်းအလုပ်လုပ်နေကြောင်းဆိုပါတယ်။
“NYU ရဲ့ စမ်းသပ်ချက်အောင်မြင်ခြင်းသည် ကျောက်ကပ်လုပ်ဆောင်ချက်လုံးဝမရှိတော့တဲ့ လူနာတွေအတွက် စမ်းသပ်နိုင်ဖို့ လမ်းကြောင်းအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး နောက်နှစ်နှစ် ဒါမှမဟုတ် သုံးနှစ်အတွင်း လုပ်ဆောင်နိုင်မယ်” လို့ ဒေါက်တာ ရောဘက်က ဆိုပါတယ်။အစားထိုးပေးနိုင်မယ့် လူ့ကျောက်ကပ်မရရှိမချင်းပြင်းထန်လူနာများအတွက်ခေတ္တအစားထိုးပြီး အသက်ဆက်နိုင်မယ့် ရေတိုဖြေရှင်းနည်း တစ်ခုဖြစ်ဖို့ မျှော်လင့်လျက်ရှိနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဗိုက်တာမင် C ရဲ့အကျိုးကျေးဇူး(၇)မျိုး
September 23, 2021 by Shwengwe Games
Covid ကာလမှာ ကိုယ်ခံအားကောင်းအောင်ဆိုပြီး လူတိုင်းနီးပါး အသောက်များလာတဲ့ Vitamin C ဟာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေ ရနိုင်သေးလဲဆိုတာ သိချင်နေမယ်ထင်ပါတယ်။
Vitamin C ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အကျိုးကျေးဇူး (၇) ခု
Vitamin C ဟာ ခန္ဓာကိုယ်က မထုတ်လုပ်နိုင်သော်လည်း ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများစွာနှင့် essential vitamin တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
Vitamin C သာ ရေထဲမှာပျော်ဝင်နိုင်ပြီး လိ‌မ္မော်သီး၊ စတော်ဘယ်ရီသီး၊ ကီဝီသီး၊ ငရုတ်ပွသီး၊ broccoli၊ ကိုက်လန်နှင့် ဟင်းနုနွယ်တို့လို့ အသီးအနှံနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များစွာမှာ တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။
နေ့စဉ်စားသုံးသင့်တဲ့ Vitamin C ပမာဏမှာ အမျိုးသမီးများအတွက် ၇၅ မီလီဂရမ်နှင့် အမျိုးသားများအတွက် ၉၀ မီလီဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။
များသောအားဖြင့် လိုအပ်တဲ့ vitamin C ကို အစားအစာများမှ ရယူရန် အကြံပေးကြသော်လည်း လူအတော်များများက သူတို့ရဲ့ vitamin C လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းရန် ဖြည့်စွက်စာများကို သောက်သုံးကြပါတယ်။
ယခုဆောင်းပါးမှာတော့ vitamin C supplement များရဲ့ သိပ္ပံနည်းအရ အထောက်အထားရှိပြီးဖြစ်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူး (၇) ချက်ကို ဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
1. နာတာရှည်ရောဂါများ ဖြစ်နိုင်ချေကို လျှော့ချပေးခြင်း
Vitamin C ဟာ သွေးတွင်း antioxidant ပမာဏကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သော အားကောင်းတဲ့ antioxidant တစ်မျိုးဖြစ်တာကြောင့် နှလုံးရောဂါကဲ့သို့ နာတာရှည်ရောဂါများ ခံစားရနိုင်ခြေကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။
2. သွေးပေါင်ချိန်တက်ခြင်းကို ထိန်းညှိပေးနိုင်ခြင်း
ဗီတာမင် C ဖြည့်စွက်အားဆေးတွေဟာ ကျန်းမာသော အရွယ်ရောက်သူများအပြင် သွေးတိုးရောဂါရှိသူများကိုပါ သွေးပေါင်ကျစေကြောင်း တွေ့ရှိထားကြပါတယ်။
3. နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကို လျှော့ချပေးခြင်း
တစ်နေ့လျှင် ဗီတာမင် C ဖြည့်စွက်အားဆေးပမာဏ အနည်းဆုံး 500 mg သောက်ပေးခြင်းဖြင့် နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။
ဤဖြည့်စွက်များသည် နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ LDL (မကောင်းသော) ကိုလက်စထရောနှင့် triglycerides မြင့်မားခြင်း အပါအ၀င် နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ချေ အချက်များကို လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
သို့သော်လည်း အကယ်၍ သင်က vitamin C ပြည့်ဝတဲ့ အစားအစာတွေကို နေ့တိုင်းစားသောက်နေသူဆိုလျှင်တော့ ဖြည့်စွက်ဆေးထပ်သောက်ပေးခြင်းက သင့်နှလုံးအတွက် အပိုအကျိုးကျေးဇူးတွေ ထပ်ရလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။
4. သွေးတွင်း uric acid ပမာဏကို လျှော့ချပေးပြီး ဂေါက်ရောဂါမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်း
Vitamin C ဖြည့်စွက်ဆေးတွေဟာ သွေးတွင်း uric acid ပမာဏကို လျော့ကျစေတာကြောင့် ဂေါက်ရောဂါများမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
5. သံဓာတ်ချို့တဲ့မှုမှ ကာကွယ်ပေးခြင်း
Vitamin C ဖြည့်စွက်ဆေးတွေဟာ အစားအစာမှ သံဓာတ်စုပ်ယူမှုကို တိုးတက်စေရန် ကူညီနိုင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Vitamin C ဟာ အပင်မှအခြေခံသော သံဓာတ်များကဲ့သို့ စုပ်ယူနိုင်မှု အားနည်းတဲ့ သံဓာတ်တွေကို ခန္ဓာကိုယ်တွင်း လွယ်ကူစွာစုပ်ယူနိုင်တဲ့ သံဓာတ်အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးပါတယ်။
အထူးသဖြင့် အသားတွေဟာ သံဓာတ်ရဲ့ အဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်တာကြောင့် သတ်သတ်လွပ်သမားများအတွက် vitamin Cဟာ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် vitamin C ၁၀၀ မီလီဂရမ်မျှ သောက်သုံးပေးခြင်းဖြင့်ပင် သံဓာတ်စုပ်ယူမှုကို ၆၇ ရာခိုင်နှုန်းအထိ တိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် vitamin C ဟာ သံဓာတ်ချို့တဲ့‌သောသူများအတွက် သွေးအားနည်းရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကို လျှော့ချပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
6. ကိုယ်ခံစွမ်းအား မြှင့်တင်ပေးခြင်း
ဗီတာမင် C ဟာ သွေးဖြူဥဆဲလ်တွေရဲ့ လုပ်ငန်းကို ပိုမိုထိရောက်စွာ ကူညီပေးခြင်းဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ခုခံအားစနစ်ကို အားကောင်းစေပြီး ဒဏ်ရာများကိုလည်း လျှင်မြန်စွာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။
7. အသက်ကြီးလာတာနှင့်အမျှ မှတ်ဉာဏ်နှင့် စဉ်စားတွေးခေါ်နိုင်စွမ်းကို ကာကွယ်ပေးခြင်း
Vitamin C ပမာဏနည်းခြင်းဟာ မှတ်ဥာဏ်နှင့် ဦးနှောက်အာရုံကြောဆိုင်ရာပြဿနာများနှင့် ဆက်စပ်မှုရှိနေပြီး အစားအစာများနှင့် အာဟာရဖြည့်စွက်စာများမှ vitamin C မြင့်မားစွာစားသုံးခြင်းသည် ၎င်းတို့မှ ကာကွယ်နိုင်တဲ့ အာနိသင်ရှိကြောင်းကို တွေ့ရှိရပါတယ်။
Credit My Medicine
ဒီနေ့ ဘာဟင်းလဲ…. ကြက်သားအာလူး၊ နောက်နေ့ရောက်တော့လဲ ကြက်သားကြော်နဲ့ ကြက်စွပ်ပြုတ်၊ နေ့တိုင်းနီးပါး ကြက်သားပဲ စိတ်တောင်ညစ်လာပြီ ဆိုသူလေးတွေ ရှိနေပြီလား…………
ဒါဆိုရင် ဒီဆောင်းပါးလေး ဖတ်ကြည့်နော်။
ကြက်သားစားတာ ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းပါတယ်။ 🍗🍗🍗
ကြက်သားက နေမကောင်းမှ စားရတဲ့ ဓာတ်စာ မဟုတ်ပါဘူး။ နေကောင်းနေသူအဖို့လည်း ကိုယ်ခံအားကို အကောင်းဆုံး ဖြစ်နေစေဖို့ ကြက်သားစားဖို့လိုပါတယ်။ အခုလို ကိုဗစ်ကာလမှာ ရောဂါကို ခုခံကာကွယ်ဖို့က ကိုယ်ခံအားကောင်းဖို့ဆိုတော့ အခုကာလမှာ ကြက်သားက စားပေးသင့်တဲ့ အာဟာရပါပဲ။
ဘာကြောင့် ဒီလိုပြောနေရတာလဲဆိုတာကို အတူတူ ဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။
ကြွက်သားတွေကို တည်ဆောက်ပေးတယ်။ 🍗🍗🍗
ကြက်သားက အသီးအရွက်တွေကနေ မရနိုင်တဲ့ ပရိုတင်းကို ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ အာဟာရတန်ဖိုးမြင့် အစားအစာတစ်ရပ်ပါ။ အဆီမပါတဲ့ ကြက်သားမှာ ပရိုတင်း ကြွယ်ဝစွာပါဝင်နေပါတယ်။
ကြွက်သားတွေ ဖြစ်ပေါ်စေဖို့ဆိုရင် အရေခွံမပါတဲ့ ကြက်သားကို စားပေးလို့ရပါတယ်။
အရိုးတွေ ကျန်းမာစေတယ်။ 🍗🍗🍗
ကြက်သားမှာ ပရိုတင်း အပြင် ကယ်လ်ဆီယမ်၊ phosphorus တို့လိုမျိး သတ္တုဓာတ်တွေ ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်နေပါတယ်။ ဒီသတ္တုဓာတ်တွေက အရိုးတွေကို သန်မာစေဖို့ အကောင်းဆုံး အားဖြည့်ပေးပါတယ်။ အဆစ်နာတာတွေကို သက်သာစေနိုင်တဲ့ selenium လည်း ပါဝင်နေပါသေးတယ်။
စိတ်ဖိစီးမှုကို ပြေလျော့စေတယ်။ 🍗🍗🍗
ကြက်သားမှာ စိတ်ဖိစီးမှုကို ပြေလျော့စေနိုင်တဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ tryptophan နဲ့ ဗီတာမင် B5 တို့ပါဝင်နေပါတယ်။ ဒီ ဗီတာမင်တွေက စိတ်ရောကိုယပါ တည်ငြိမ်စေပြီး စိတ်ဖိစီးမှုကို ပြေလျော့စေနိုင်ပါတယ်။
ကြက်သားစားတာက စိတ်ကျေနပ်မှု ရစေပြီး စိတ်ဖိစီးမှု ပြေလျော့စေသလို ပျော်ရွှင်မှုကိုပါ ခံစားရစေပါတယ်တဲ့။
ကိုယ်ခံအား ကောင်းစေတယ်။ 🍗🍗🍗
နေမြန်မြန်ကောင်းအောင် ကြက်စွပ်ပြုတ်သောက်ဆိုတာ ကြားဖူးနေကျ စကားတစ်ခုပါ။ ကြက်စွပ်ပြုတ်က အအေးမိတာ၊ တုပ်ကွေးဖြစ်တာ၊ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ကူးစက်တာတွေကို အထိရောက်ဆုံး သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
ပုံမှန်အခြေအနေမှာလည်း ကြက်စွပ်ပြုတ်သောက်ပေးလို့ရပါတယ်။ ဒီလို သောက်သုံးပေးတာက အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကို ကျန်းမာစေပြီး ကိုယ်ခံအားဆဲလ်တွေကို အကောင်းဆုံး အားဖြည့်ပေးနိုင်တာကြောင့် ကိုယ်ခံအားပြည့်ဝနေစေမှာပါ။ ရောဂါပိုးတွေ အန္တရာယ်ကနေ ကာကွယ်ပြီးသား ဖြစ်တာပေါ့။
နှလုံး ကျန်းမာစေတယ်။ 🍗🍗🍗
ကြက်သားမှာ ရုတ်တရက် နှလုံးရပ်တာကို ကာကွယ်ပေးတဲ့ ဗီတာမင် B6 ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်နေပါတယ်။ ဗီတာမင် B6 က ရုတ်တရက် နှလုံးရပ်တာကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ homocysteine ပမာဏကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒါတင်မကသေးပါဘူး။ ကြက်သားမှာ သွေးတွင်းကိုလက်စထရောကို လျှော့ချပေးနိုင်တဲ့ niacin ပါဝင်နေတာကြောင့် နှလုံးရောဂါ၊ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ ရောဂါတွေကို အထိရောက်ဆုံး ကာကွယ်နိုင်မှာပါ။ ပြည့်ဝဆီ ပါဝင်မှု နည်းပြီး omega-3 fatty acids ပါဝင်တာကြောင့် နှလုံးသွေးကြောတွေကို ကျန်းမာစေပြီး နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ ရောဂါ ကင်းစေပါတယ်။
ရာသီအကြိုလက္ခဏာ သက်သာစေတယ်။ 🍗🍗🍗
ကြက်သားမှာ Magnesium ပါဝင်နေတာကြောင့် လေဒီလေးတွေ ခံစားရနိုင်တဲ့ ရာသီအကြို လက္ခဏာကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
ကဲ…အစာလည်း ဆေး၊ ဆေးလည်း အစာဆိုတဲ့အတိုင်း အခုလိုကာလမှ ကြက်သား စားရတာကို ငြီးငွေ့မနေဘဲ ကိုယ်ခံအားကောင်းကောင်းနဲ့ ကိုဗစ်ကို ကာကွယ်ဖို့ စားဦးနော်။
အချိန်ပြည့်အလုပ်လုပ်နေရတဲ့ မျက်စိလေးတွေကျန်းမာနေအောင် ဂရုစိုက်လုပ်ဆောင်ရမည့်နည်းလမ်းများ
September 12, 2021 by Shwengwe Games
ကလေးများအတွက် သတိထားသင့်သောပရုတ်ဆီ အဆိပ်သင့်ခြင်း လက္ခဏာများ
ပရုတ်ဆီက အရေပြားကို ခဏအေးမြစေရုံသာရှိပြီးချောင်းဆိုးနှင့် ချွဲကျပ်ခြင်းကို အမှန်တကယ်သက်သာစေကြောင်း သု တေသနလုပ်သူများက မတွေ့ရှိပါ။
ပရုတ်ဆီကိုခြောက်သွေ့သော၊ နေနှင့်လေ လောင်ထားသော၊ကွဲရှနေသော အ ရေပြားတွင်မသုံးသင့်ပါ။အရေပြားပိုလောင်ပြီးသွေးထဲရောက်နိုင်ပါသည်။လိမ်းသောပမာဏများလျှင်လည်းသွေးထဲသို့အလွယ်တကူ ရောက်နိုင်ပါသည်။
ပရုတ်ဆီကိုထုတ်လုပ်သူများက အ ရေပြားတွင်လိမ်းရန်သ ရည်ရွယ်သော် လည်းကလေးပါးစပ်ထဲသို့မတော် တဆ ဝင်သွားလျှင်ပမာဏနည်းနည်းနှင့်အဆိပ် ပြင်းပါသည်။ အမြောက်အများရှူမိလျှင်လည်း အဆိပ်သင့်တတ်ပါ သည်
ကလေးတစ်ယောက် ပရုတ်ဆီ အဆိပ်သင့်လျှင် အောက်ပါလက္ခဏာများပြပါမည်။
(၁) အသားလှုပ်ခြင်း၊ ဂနာမငြိမ်ဖြစ်ခြင်း၊ ကြောင်စီစီဖြစ်ခြင်းများတွေ့ရပြီးနောက် စားမိပြီး ၁ နာရီခွဲအတွင်း တက်နိုင်ပါသည်။
(၂) တက်ပြီးလျှင် အသက်ရှူနှုန်းနှေးလာပြီး ရပ်သွားနိုင်ပါသည်။
(၃) ပါးစပ်တဝိုက်နှင့် အစာအိမ်အတွင်း သား လောင်ကျွမ်းတတ်ပါသည်။ အန်ပါလိမ့်မည်။
မိမိကလေးတွင် ပရုတ်ဆီ မတော်တဆ ပါးစပ်ထဲဝင်သွားကြောင်းသိလျှင်သိချင်း၊ အဆိပ်မိသော လက္ခဏာများရှိလျှင်ရှိချင်း အရေးပေါ်ဌာနသို့ အမြန်ဆုံးခေါ်သွားပါ။
နေနေမိုးဆွေ- Child Health Myanmar
စနစ်ကျမှန်ကန်သော Self Quarantine ပြုလုပ်နည်းများ
August 12, 2021 by Shwengwe Games
Self Quarantine လုပ်သင့်သော လူနာများ
i. ဆေးကုသမှုပေးနေသူမှ လူနာအား ဆေးပညာရှုထောင့်အရ ရောဂါလက္ခဏာ မပြင်းထန်သူ/ လက္ခဏာလုံးဝမပြသူဟု သတ်မှတ်ထားသူဖြစ်ရမည်။
ii. ထိုကဲ့သို့သောဖြစ်ရပ်များတွင် ၎င်းတို့နေထိုင်ရာနေရာ၌ လူနာသီးခြားနေထိုင်ရန်နှင့် ထိတွေ့မှုရှိသော မိသားစုဝင်များ quarantine နိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သော အဆောက်အအုံ ရှိသင့်သည်။
iii. 24 နာရီ၊ 7ရက်ပတ်လုံးအတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပေးသူ အသင့်ရှိနေရမည်။ လူနာ၏ home isolation ကာလတစ်လျှောက်လုံးတွင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူနှင့် ဆေးရုံကြား အဆက်အသွယ် မပြတ်ရှိနေရမည်
iv. အသက် 60 အထက် သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့် ‌သွေးတိုးရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါ၊ နာတာရှည် အဆုတ်/အသည်း/ကျောက်ကပ် ရောဂါ၊ ဦးနှောက်သွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါတို့လို ရောဂါအခံရှိသူများသည် ဆေးကုသမှုပေးနေသူမှ သင့်လျော်စွာ ဆုံးဖြတ်ပြီးမှသာ home isolation လုပ်ခွင့်ရှိသည်။
Self Quarantine လူနာအတွက် ညွှန်ကြားချက်များ
i. လူနာသည် အခြားမိသားစု ၀င်များနှင့် မထိတွေ့ဘဲ သီးခြားနေထိုင်ရမည်။ သတ်မှတ်ထားသော အခန်းအတွင်းမှာပဲ နေထိုင်ကာ အိမ်တွင်းရှိ အခြားလူများ အထူးသဖြင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့် သွေးတိုးရောဂါ၊ ဦးနှောက်သွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါ၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါ ကဲ့သို့သော ရောဂါအခံရှိသူများနှင့် ဝေးဝေးမှာနေရမည်။
ii. လူနာအား လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်သော အခန်းတွင်ထားသင့်ပြီး ပြတင်းပေါက်များကို ဖွင့်ထားသင့်သည်။
iii. လူနာသည် အလွှာသုံးလွှာပါဝင်သော medical mask များကို အမြဲဝတ်ဆင်ရမည်။ Maskကို ၈ နာရီကြာ အသုံးပြုပြီးတိုင်း သို့မဟုတ် အချိန်မတိုင်ခင် စိုစွတ်ညစ်ညမ်းသွားလျှင် စွန့်ပစ်ရပါမည်။ စောင့်ရှောက်မှုပေးသူသည် အခန်းထဲသို့၀င်ရောက်ပါက လူနာနှင့် စောင့်ရှောက်သူနှစ်ဦးလုံး N95 mask ဝတ်ဆင်ဖို့ အကြံပြုလိုပါသည်။
iv. ပိုးသတ်ပြီးမှသာ maskကို စွန့်ပစ်ရမည်။
v. ရေဓာတ်လုံလောက်စွာ ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန် အနားယူပြီး အရည်များများသောက်‌ပေးရမည်။
vi. အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပါ။
vii. အနည်းဆုံးစက္ကန့် ၄၀ ကြာ လက်ကို ဆပ်ပြာနှင့်ရေနှင့် ဆေးပါ၊ သို့မဟုတ် alcohol-based ပိုးသတ်ဆေးများဖြင့် မကြာခဏ သန့်စင်ပေးပါ။
viii. ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပစ္စည်းများအား တစ်အိမ်တည်းနေ အခြားလူများနှင့် မမျှဝေသင့်ပါ။
ix. အခန်းထဲမှာ မကြာခဏ ထိတွေ့နေရသော မျက်နှာပြင်များ (စားပွဲအပေါ်မျက်နှာပြင်၊ တံခါးလက်ကိုင်ဖုများ၊ လက်ကိုင်များ စသဖြင့်) တို့ကို alcohol-based ပိုးသတ်ဆေးများဖြင့် သန့်ရှင်းပေးရမည်။
x. သွေးထဲရှိ အောက်ဆီဂျင်ပမာဏအား pulse oximeter အသုံးပြု၍ ကိုယ်တိုင်လေ့လာစောင့်ကြည့်မှုကို အားပေးပါသည်။
Home isolation ကို ရပ်ပစ်ရမည့်အချိန်
Home isolation လုပ်‌နေသော လူနာသည် ရောဂါလက္ခဏာများစတင်ချိန်မှ အနည်းဆုံး 10ရက် ကျော်ပြီးနောက် (သို့မဟုတ် asymptomatic ဖြစ်ပွားမှုများအတွက် နမူနာယူသည့် နေ့မှစ၍) နှင့် 3ရက်မျှ အဖျားတက်ခြင်းမရှိသည့်နောက်တွင် home isolationကို အဆုံးသတ်နိုင်သည်။ Home isolation ကာလပြီးဆုံးသည့်အခါတွင် စမ်းသပ်မှုများ ပြုလုပ်ရန် မလိုအပ်တော့ပါ။
Source – Guidelinesforhomequarantine.
Categories Health Tags Covid-19, Quarantine, ကိုဗစ်-19